Indlela yokuqala ukukhula kwengane: iseluleko sochwepheshe - Psychology 2022
Indlela yokuqala ukukhula kwengane: iseluleko sochwepheshe
Mayelana nokuthuthukiswa kwangaphambi kwesikhathi
Mayelana nokuthuthukiswa kobuchopho
Ukuxhumana phakathi kokuthuthukiswa kwangaphambi kwesikhathi kanye nekusasa
Wonke umzali ubuza umbuzo wokuthi kufanele aqale nini ukunaka ukukhula kwengane yakhe. Futhi lokhu kujwayelekile ngokuphelele.
Kunemibono eminingi ngalolu daba. Ukuze uqonde ukuthi likuphi iqiniso, "Lowo" waphendukela ku-Elena Antonyuk - umama wezingane ezimbili, kanye nochwepheshe wokuthuthukiswa okuvumelana kwengane.
U-Elena Antonyuk unguchwepheshe ekuthuthukisweni okuvumelana kwamandla omntwana ngokomzimba nangokwengqondo. Uqeqeshwe futhi waqeqeshwa nendodana yakhe ezikoleni zokuthuthukiswa kwengane eNgilandi. Kwaphela iminyaka emi-4 efunda i-psychology yezingane, izindlela zokuthuthukiswa kwasekuqaleni kokuthuthukiswa ngokomzimba nangokwengqondo kwezingane kanye nokukhuliswa kwazo ngokuvumelana. Yena ngokwakhe usebenzisa wonke amasu akhuluma ngawo ukuze aqeqeshe futhi afundise izingane zakhe. Umqeqeshi Webhizinisi Oqinisekisiwe we-IPS Systems
Namuhla, sibona izinguquko zomhlaba jikelele. Amafomethi amadala okuqeqeshwa, lapho kudingekile ukukhulisa isisebenzi sasefektri esilalelayo, esingaqalisi, esithulile, sesiyinto yesikhathi esidlule.
Abazali abaningi bayakubona ukubaluleka kokukhula kwengane. Kodwa, noma kunjalo, kukhona ukuhlanekezelwa kwalo mqondo.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi "intuthuko yangaphambi kwesikhathi" imayelana nokuhambela imisebenzi yentuthuko nezingane ukusuka onyakeni owodwa kuye esikoleni. Kodwa kufanele kube inkimbinkimbi yentuthuko evumelanayo ngezindlela ezi-5: ngokomzimba, ngokwengqondo, kwezenhlalo, ngokomzwelo, ngokomoya nangokokuziphatha.
Idlanzana lososayensi bomhlaba abacwaninga ngokukhula kobuchopho baye bafinyelela esiphethweni sokuthi isipiliyoni seminyaka yokuqala yokuphila esilolonga amathuba ekusasa omntwana.
Lokhu kungenxa yokuthi kungunyaka wokuqala wokuphila komuntu lapho kwakheka u-80% wobuchopho, azosebenzisa impilo yakhe yonke, ukuxhumana kwe-neural kwakhiwa ebuchosheni.
Ngeminyaka engu-3, ​​90% isivele yakhiwe, futhi eminyakeni engu-6 - cishe yonke ingqondo. Lokhu kusho ukuthi udinga ukuqala ukuzilolonga kusukela ekuzalweni (saqala kusukela osukwini lwesi-5), ukuze ungaphuthelwa iminyaka ephumelela kakhulu empilweni yengane.
Ukuthi zonke izinzwa zomuntu zikhula kahle kangakanani (ukuzwa, ukubona, ukunambitha, ukuthinta, ukuhogela) kuncike ekusebenzeni kwemoto kanye nokuthuthukiswa kwemishini ye-vestibular ngonyaka wokuqala wokuphila. Futhi lapho izinzwa zithuthukiswa kangcono, kuyoba lula ngengane ukufunda, ukubona nokucubungula ulwazi, ukusebenzisa umcabango, ukudala, nokunye okuningi.
Ukuhamba nokuhlakanipha kuhlobene eduze, ikakhulukazi ebuntwaneni. Ukunyakaza okwengeziwe - okuhlakaniphile, okugijima kakhulu futhi kunempilo yengane.
Lapho izingane zethu zifunda ngokushesha amakhono nolwazi olusha, kulapho zizonikezwa khona kalula futhi ngokushesha, futhi amathuba amaningi namathemba ozowanikeza ingane yakho esikhathini esizayo. Ngokuhamba kwesikhathi ingane ithola ikhono elisha, kunzima kakhulu futhi isikhathi eside inikezwa kuye, umzamo nesikhathi esidingekayo.
Lokhu kusho ukuthi ulwazi lweminyaka yokuqala luyisisekelo sempilo yakho yonke.
Ososayensi bomhlaba sebevele bafakazele ukuthi izingane ababehlanganyela nazo ekukhuleni ngokomzimba zakuqala:
khombisa imiphumela emihle kakhulu ekuqeqeshweni;
kalula kahle imidlalo emisha futhi uzuze imiphumela ephezulu kuzo;
yenza kahle ekukhuleni kwemizwelo;
khombisa izimfanelo zobuholi;
babe nokuvuthwa kwezenhlalo nezomzwelo;
abe nokuxhumana okuthuthukile;
amakhono okuxhumana kanye nezenhlalo.
Kodwa-ke, uma kubhekwa iqiniso lokuthi kuze kube yiminyaka engu-6 ubuchopho busakhula ngesivinini esikhulu, abazali kufanele baqeqeshe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 ngenkuthalo.Ngisho noma uqale ukuqeqesha izingane hhayi kusukela ekuzalweni, kusanikeza umphumela omuhle.